La hadal Mustaqbal | Mustaqbal Radio
Home - Barnaamijyo - La hadal Mustaqbal
16; sano ka hor Weerarkii Sebtember ee lagu qaaday Mareykanka.
Maanta oo kale 15 sano kahor, 11-Sebtember-2001, ama (nine eleven 11/9,) sida loogayaqaano Mareykanka, maalin tallaado ah ayaa ururka Alqaacidda waxa uu ku qaaday dalka Mareykanka 4 weerar oo isku xiran, kuwaas oo qorshe iyo xirfad ahaanba u muuqday kuwo si adag loo qorsheeyey. Weeraradaas waxaa ku dhintay 2996 qof, sida lagu sheegay tirakoobka qasaaraha nafeed ee ka dhashay weerarkaas, ...
Kursiga Callaalan ee Xildhibaan Mahad Cabdalla Cawad!
Xildhibaan Mahad Cabdalla Cawad oo kamid ahaa xubnihii madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland u soo sharraxay in ay u tartamaan kamid noqoshada golaha guurtida ee Puntlan ka soo gelaya Aqalka sare ayaa maanta kamid noqday xildhibaano kamid noqonaya aqalka hoose oo Muqdisho lagu doortay. Waxa ay doorashada xildhibaan Cawad, ku lammaansanayd doorashada xubnaha aqalka Hoose ka soo gelaya gobolka Banaadir, Waxa ...
Madaxweyne Butin 3, Marwo oo bir ah ayuu bartanka uga jiraaa!
Haddii ay marwo Heleri Kilinton oo xisbiga dimoqraadigu u sharraxay in ay noqoto madaxweynaha Mareykanka ee 2017-2020-ka, ku guuleysato doorashada madaxweynenimo ee Mareykanka oo dhici doonto haddii Alle idmo 8-da Bisha Nofember-2016, waxa ay noqoneysaa taariikhda haweeneydii ugu horreysay ee Mareykan ah ee gasha aqalka cad ee Mareykanka iyada oo aan Xaaska madaxweyne ahayne iyadu ah markan ah madaxweyne la ...
Colaadda Galkacyo, laba Cabdi Caalumatu Su’aal WQ: Axmed Ciise Guutaale
Inkasta oo Mudug looga mahmaaho “colaad wiil baa ku dhinta, ee wiil kuma dhasho”, haddana dirirta lama daayo, oo markii dogob meel ka baqtiyaba mid kale ayaa meel ka qiiqa” Colaadaha gobolkaasi waxa ay reebeen ceeb iyo dhabanahays badan, balse weli waxa jira uun colaadda jecel oo ay dirirtu u qabato sida dadka leh balwaddu ay u qabatimaan suntan heroin-ka ...
Warsaxaafadeed: Guddiga Federaalka ee Hirgelinta Doorashooyinka Dadban (GFHDD)
Hannaanka Doorashooyinka 2016 Warsaxaafadeed: Iftiimin Goobta Doorashada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe Muqdisho, 2da October 2016 – Annaga oo xaqiijineyna xilka iyo waajibka GFHDD ee ku xusan qodobka 6aad xeerka lagu dhisay guddiga oo qeexaya “Guddiga GFHDD wuxuu mas’uul ka yahay guud ahaan kormeerka hannaanka doorashada iyo xaqiijinta in ay si isku mid ah ...
Jawaabta Koowaad ee Soomaaliya.
Afar qareen oo caalami ah ayaa maanta bixiyay Jawaabta Soomaaliye ee ku wajahan diidmada Kenya ay dooneyso in ay isku hortaagto in Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladdu ay gasho kiiska muranka soohdinta badeed ee Soomaaliya iyo Kenya. Waxaa xusuus mudan in ay dacwadda badda ay marka hore Makxmadda u gudbisay Soomaaliya oo dalbtay in ay calaamadeyso soohdinta badda ee Soomaaliya ...
Maxaad ka taqaan Astaanta cad ee ku taal xagga sare ee Suulkaaga?
Inta badan dadku waxa ay bar cad oo aad u yar ku leeyihiin ciddiyaha, bartaati waxa ay u egtahay bil dhalatay oo aad u yar, waxa ay bartaasi ka muuqata ama ay ku taal meesha ay ciddida iyo hilibku iska galaan, haddaba maxaad u maleyneysaa in bartaasi tahay? Sida uu daabacay bogga Internetka ee Ma og tahay? Oo ka faalooda ...
Danjiraha Ingiriiska ee Sucuudigu Waxa uu kamid ahaa Xujeydii Sanadkan
Simon Collis; safiirka Ingiriiska ee Boqortooyada Sucuudiga ayaa sanadkan waxa uu kamd ahaa Muslimiintii gudatay tiirka 5aad ee Islaamka oo ah Xajka, Simon ayaa Islaamay kadib muddo dheer oo uu ka shaqeynayey Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ingiriiska. Xaaska danjire Simon Collis, oo qudheedu Islaam ah ayaa ugu hambalyeysay ninkeeda, soo gelidda diinta Islaamka iyo gudashada tiirka xajka, iyada oo soo ...
3, walxood oo aadan ka aqoon Muuska/Mooska.
Mooska/Muusku waa mid kamid ah qudaarta ku baxda Kulleylaha adduunka oo dhan. Muusku ma aha geed sida lagayaabo in dad badani u haystaan, waxa uu kamid yahay oo ku tirsan yahay dhirta nuuca Ramaaska loo yaqaan. Moosku waxa uu leeyahay waxtar cunto iyo mid qudradeed, taas oo ah sababta adduunka oo dhan loo jecel yahay cunidda iyo Cabidda Muuska. Dhinaca ...
Wajiyo kala duwan iyo Aragti isku mid ah! WQ: Calinuur Salaad
Mustaqbal Radio: Billaabashada ololaha doorashooyinka madaxtinimo ee Jamhuuriyadda Soomalaiya, waxa uu ka dhigan yahay soo if bixidda aragti iyo tusaale kala duwan, oo cod bixiyayaasha shacabka, sida dadban u matalaya siiya xulasho ay ku kala doortaan murshaxiinta u taagan xilka madaxwenaha Soomaaliya hogaamin doona Afarta sano ee soo socota. Caqabadda ugu weyn ee murashaxa madaxtinimo qabsan doonta ayaa ah, sida ...
Talo cayn wareegtay la iskuma cannaanto! WQ: Axmed Ciise Guutaale
Mustaqbal Radio: Welwel badan oo aan qabo , lagana yaabo in la ila wadaago, ayaa sababay in aan sameeyo qoraalkan, Waxa aan ka walaacsanahay natiijada ka dhalan doonta, sida hoggaamiyeyaasha ka soo baxa koofurta Soomaaliya, laga soo billaabo 1960-kii ay u dayaceen arrinta Somaliland, Waan isla doodaa, naftaan dagaalaa, marka aan aqriyo taariikhda iyo sooyaalka xorriyadda iyo midowga labada gobol ...
Sidee u shaqeysaa xarunta diyaarinta Xafladaha ee SOMTA? (Wareysi)
Muqdisho-Mustaqbal Radio Xarunta Diyaarinta Dhacdooyinka iyo dalxiiska (Somali Tourism Association (SOMTA), Waxa la aas-aasay bishii Sebtember-2012, Ujeedku waa hagaajinta hannaanka dalxiiska ee Soomaaliya iyo in adduunka intiisa kale laga dhaadhiciyo muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay Caalamka Waxaa ka shaqeeya dhalinyaro isugu jirta kuwo dibadda ka yimid iyo inta badan kuwo dalka sii joogay, kuwaas oo si joogto ah u diyaariya munasabadaha ...